Emailku ma dhintay? | Martech Zone
Markii aan aqriyay sheekadii ugu dambeysay ee ku saabsan an Kooxda IT ee UK oo mamnuucay emaylka, Waxay ahayd inaan istaago oo aan ka fikiro waxqabadkeyga maalin kasta iyo inta iimaylku iga xado maalin wax soo saar leh. Su’aasha ayaan u soo ban dhigay akhristayaasheena iyaga oo adeegsanaya Zoomerang doorashada dad aad uyarna waxay u maleeyeen in emaylku dhiman doono waqti kasta.
Dhibaatada, sidaan qabo, maahan email. Marka emaylka si wax ku ool ah looga faa'iideysto, waa wax aad ufiican oo wax ku ool ah. Haysashada qoraal, kooban, isgaarsiin caddaynaysa yoolalka iyo geeddi-socodka waxay sahlaysaa in dadku ku dhaqmaan emaylladaas. Uma maleynayo in shirkadda UK ay is caawinayso iyada oo xannibaysa habka isgaarsiinta guud ee guud ahaan la qaato. Waxay si fudud u dejin lahaayeen qawaaniin ka mid ah hawlgelinta sida ay ugu maareeyeen emaylkooda gudaha.
Dhibaatada ayaa ah SPAM iyo howsha taas oo aan subscribe si aad ugu dirto emayl. Muddo 20 sano ah, waxba iskama beddelin nidaamka ku-qoritaanka emaylka. E-mayllada waaweyn ee shirkadaha wanaagsan xannibaadda sii wad, halka spammers sii wadaan si aad email uga hesho. Saameynta wax soo saarka (iyo deegaanka) waa cajiib.
Ilaa ISP (Bixiyaha Adeegga Internetka) ay la tillaabato habab cusub, arrinta way sii socon doontaa. Taladaydu waxay noqon doontaa Google Apps inay horumariso nidaamka diiwaangelinta rukhsadda ee suuqleyda iyo maaraynta ka-soo-bixidda adeegyadooda. Shirkadaha aniga oo kale ah waxay iska diiwaangelin karaan boggeena ISP oo damiyaan wixii xiriir ah ee aan la oggoleyn. Waqti kasta oo aan ka door bidno warside, xulashada ayaa iska qori doonta ISP… ma ahan ESP (Adeeg Bixiye Email). ISP uma baahna wax kale… waxay iska xiri karaan emaillada oo dhan marka laga reebo daabacadaha la oggol yahay.
Macluumaad ku saabsan Guulaha muuqda.
Tags: iimayl dhintayEmail Marketingadeeg bixiyaha adeegga emaylkaemaylka tirakoobkagaar ahaaninfographicemail baa dhintayispemaylka qashinka ah
Tijaabinta Goobtu waxay kuu horseedaa farxad Farxad leh